Tapa-kevitra avy amin'ny IMM mankany amin'ny fiara fitateram-bahoaka | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulFanapahan-kevitra ara-tsosialy avy amin'ny IMM mankany amin'ny fiara fitateram-bahoaka
26 / 03 / 2020 34 Istanbul, Railway, PHOTOS, ANKAPOBENY, Highway, KENTİÇİ Rail Systems, Tire Wheel Systems, Headline, Faritra Marmara, Metro, Metrobus, TORKIA, tram
Tambajotra ara-tsosialy avy amin'ny ibb mankany amin'ny fiara fitateram-bahoaka
Istanbul Metropolitan Municipality; Ny rafitry ny lalamby dia nampifangaro ireo tapa-taratasy sy bokikely nomaniny mba hitahiry lavitra ny metrobus ary ny fiara fitateram-bahoaka mankany amin'ireo fiara fitateram-bahoaka.
Mihabe ny fepetra noho ny fipoahan'ny coronavirus, izay misy fiantraikany amin'ny firenentsika sy izao tontolo izao. Taorian'ny fampihenana ny fahaiza-mitondra mitondra mpandeha voalaza ao amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny fiara fitateram-bahoaka any amin'ny fiara fitateram-bahoaka rehetra hatramin'ny 50 isan-jato, dia nomena ny toeran'ny sori-dalana ara-tsosialy koa.
"Arovy ny elanelanao sosialy" ho an'ny metro sy ny tram ary ny fiara metrobus manerana an'i Istanbul. Nisy sora-baventy fampandrenesana nahantona niaraka tamin'ny taratasy fametahana «Avelao izany hipetraka izany». Hapetraka amin'ny bisy IETT, OTOBÜS AŞ sy ÖHO ireo sora-baventy sy sticker.
Miaraka amin'ny fametahana miraikitra amin'ny seza tokony havela tsy avela, fitsipika iray metatra iray no arahana ao amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Ny fandaharana dia nambara amin'ny besinimaro ihany koa amin'ny alàlan'ny fampandrenesana anaty fiara.
Noho ny fidinan'ny mpandeha hatramin'ny 70 isan-jaton'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny lalamby, dia tsikaritra fa nandeha an-tsokosoko tao anaty fiara ny olom-pirenena ary nipetraka tamin'ny fijerena ireo takelaka.
Amin'ny lafiny iray, ny Tale Jeneralin'ny IETT dia hampitombo ny isan'ny fitsangatsanganana mandritra ny ora fiatrehana, hisorohana ny hamafin'ny ampahany amin'ny traikefa amin'ny fiara fitaterana ary hiverina any an-trano. Ao amin'ireo fiara fitateram-bahoaka IETT, ny famokarana ny fiaran'ny mpamily fiara izay efa vita dia lehibe tokoa mba hisorohana ny fifandraisan'ny mpamily sy ny mpandeha.
Fanaraha-maso ny lafiny ara-tsosialy amin'ny fitateram-bahoaka any Antalya
Fampiroboroboana ny fampiasana ny fitateram-bahoaka amin'ny Metropolitanin'i Adana
Ireo mpandeha an-tapitrisany 84 nandroso tamin'ny fitateram-bahoaka tao Konya
Faritra ara-tsosialy amin'ny fitateram-bahoaka